Ny mahatsara sy maharatsy ny marketing ara-tsosialy
Alahady, Septambra 21, 2014 Douglas Karr
Ny toerana misy ny infographic dia tsara sy ratsy, saingy tsy fantatro fa namely ny fantsika tamin'ny lohany izany. Ny mahatsara (tsara) dia antontan'isa tena marina manohana ny ezaky ny haino aman-jery sosialy, fa ny lafy ratsy kosa dia miresaka banga amin'ny fahatakarana, paikady ary famakafakana bebe kokoa noho ny marketing miaraka amin'ny mpanelanelana. Andao horaisintsika tsirairay izy ireo. 50% ny C-Suite tsy resy lahatra amin'ny lanjan'ireo media sosialy. Mety ho olana maromaro io.